FAQs - Hebei Med Site Medicines Co., Ltd.
Bacda wasakhda & Alaabada la tuurayo
Alaabada Caafimaadka leh
Saamiyada, waqtiga hogaaminta waa ilaa 7 maalmood. Soosaar ballaaran, waqtiga hogaaminta waa 20-30 maalmood kadib helitaanka lacag bixinta deebaajiga. Waqtiyada hogaaminta ayaa dhaqan gala marka (1) aan helno deebaajigaaga, iyo (2) waxaan heynay ogolaanshahaaga ugu dambeeya alaabadaada. Haddii waqtiyadeena hogaaminta aysan ku shaqeynin waqtigaaga kama dambeysta ah, fadlan ka gudbo shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku deyi doonnaa inaanu ku haqabtiro baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Isku Soo qor Diiwaankeenna
No.500 Street Taihua, Degmada Xinhua, Sjz, Shiinaha